इन्जिनियरले गरे आफ्नै ३ वर्षीय छोराको अपहरण - Engineers Post
इन्जिनियर्स पोस्ट August 2, 2021
एक इन्जिनियरले आफ्ना ३ वर्षीय छोराको अपहरण गरेका छन् । अपहरणपछि आफ्नै श्रीमतीसँग फिरौती मागेका छन् । भारतको हैदरावादका सफ्टवेयर इन्जिनियरले २० लाख (३२ लाख नेपाली रकम बराबर) ऋण चूक्ता गर्न आफ्नै नाबालक छोराको अपहरण गरेका हुन् ।
हैदरावाद प्रहरीकाअनुसार हैदरावादको एक आईटी कम्पनीमा कार्यरत सफ्टवेयर इन्जिनियर पल्नाटी रामकृष्णले आफ्ना छोराको अपहरण गरेर भागेका थिए । अपहरणपछि उनले आफ्नै श्रीमतीसँग २० लाख फिरौती रकम मागेका थिए । फिरौती नदिएमा आफ्ना छोरासहित आत्महत्या गर्ने धम्की दिएका थिए ।
आरोपित इन्जिनियरले २० लाख ऋण लिएका थिए भने उनले उक्त ऋण चुक्ता गर्न सकेका थिएनन् । ऋण दिने व्यक्तिले ऋण चुक्ता गर्न दबाब दिएपछि ई. रामकृष्ण आफ्नै छोराको अपहरण गर्न बाध्य भएका थिए । गत जुलाई ३१ मा प्रहरीले ३ वर्षीय बालकको उद्धार गरेको थियो । उद्धारपछि बालकलाई आफ्नी आमाको जिम्मा लगाउन सफल भएको थियो । हाल आरोपित इन्जिनियरलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
प्रहरीकाअनुसार आरोपित ई. रामकृष्णले भारतमा जारी लकडाउनको समयमा घरबाटै अफिसको काम गर्दै आएका थिए । उनी लागूपदार्थ र मादक पदार्थको दुव्र्यसनीमा फसेका थिए । दुव्र्यसनीका कारण उनी २० लाख ऋणमा डुबेका थिए । –एजेन्सी
३ सय वर्ष पुरानो ड्याम भत्किनुको कारणमाथि प्रश्न चिन्ह